Maxaa lagu arkaa Amman, caasimada Urdun | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Jordan, Maxaa la arkaa
Jordan waa mid kamid ah wadamada ugu dalxiiska badan qeybtaan aduunka waana mid kamid ah wadamada ugu wanaagsan xiriirka kala dhaxeeya Mareykanka. Boqortooyada Hashemite ee Urdun waxay ku taal daafaha wabiga Urdun waxayna xuduud la leedahay Ciraaq, Saudi Arabia, Israel, Falastiin, Badda Cas iyo Badda Dhimatay sidaa darteed waxay ku taal meel aad u wanaagsan oo loogu talo galay dadka taariikhda gala.
Amman waa caasimada Urdun iyo albaabka laga galo waddankan inbadan oo ku ogaa muuqaalka muuqaalka leh ee boqoradda Rania ee joornaalka Hola! Waa magaalada ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dadka deggan oo tixgeliya Bariga Dhexe waa mid furfuran oo aad u deggan galbeedka. Marka waa magaalo dalxiis ajnabi dalxiis ku dareema. Maanta waxay noqotay mid ka mid ah magaalooyinka Carabta ee ugu booqashada badan, haddaba waa kan waxaad arki karto oo aad ku dhex samayn karto Amman.
2 Dalxiiska Amman
Amman waxay ku taal aagga dooxada waxaana markii hore laga dhisay toddobo buuro sidaa darteed buuraha buuraha weli waa kuwo aad u caan ah Ku raaxayso a cimilada oomanaha ah sidaa darteed xitaa guga heerkulku wuxuu ku dhow yahay 30 ºC. Xilliga kulaylaha badanaa way kulul yihiin jiilaalkuna wuxuu bilaabmaa markay Nofeembar dhammaato. Caadi ahaan waa qabow oo xitaa baraf ayey ku jiri kartaa hirar qabow.
42% dadka reer Urdun ayaa halkan degan waana dad badan oo soogalooti ah. Waxaa jira farac carbeed iyo Falastiiniyiin ah waana soo socdaan. Inta badan dadkeeda waa Sini Muslim waana sababta ay u jiraan masaajiddo badan. Waxa kale oo jira Masiixiyiin, inkasta oo ay yihiin dad laga tiro badan yahay. Ammaan waa magaalo dhismayaal hooseeya, marka laga reebo xarunta oo laga dhisay munaarado casri ah oo muraayado badan leh. Dhismooyinka guryuhu kama badna afar dabaq oo badiyaa waxay leeyihiin balakoonno iyo balbalooyin.
Waxaa ku yaal suuqyo waaweyn, dukaamo, makhaayado iyo baarar meel kasta oo aad u fog waa inuu noqdaa goob muxaafid ah.
Amman waa magaalo leh qarniyo taariikhi ah sidaa darteed waxay leedahay cutub taariikh ah, sidoo kale Greek, Roman, Ottoman, xitaa Ingiriis, illaa ay ka gaadhay madax-bannaanideeda. Waxay leedahay nidaam wanaagsan oo gaadiidka dadweynaha ah, oo dhowaan dayactiray, sidaas darteed waxaad ku raaci kartaa baska markii aad timaado mid ka mid ah labadiisa garoon ee caalamiga ah. Wadada weyn ee magaaladu waxay leedahay sideed goo-gooyooyin in kasta oo taraafikada qasan tahay, helitaanka jihadaadu waa mid fudud.
Maxay yihiin goobaha dalxiiska ee Amman? Waxaan ka hadli karnaa kuwa ugu muhiimsan, kuwaas oo ah kuwa ay tahay inaadan marnaba seegin: Citadel, Roman amphitheater, qubeyska Turkiga, dukaan udgoon, Matxafka Royal Automobile, Matxafka Jordan, Matxafka Qadiimiga ah iyo Matxafka. de Bellas Artes, tusaale ahaan. Marka lagu daro safarada maalinlaha ah halka ugu horeysa ee aan tagno ay tahay Petra.
Qasriga Amman Waxay ku taal buurta ugu dheer magaalada, Jebel al-Qala'a, qiyaastii 850 mitir oo sare. Buurtan ayaa la deganaa tan iyo xilligii naxaastii iyo qalcadda waxaa ku wareegsan derbi dib loo dhisay dhowr jeer xilliyo kala duwan oo taariikhi ah, dhererkiisuna yahay 1700 mitir. Gudaha, waxa aan la seegi karin ayaa ah Qasriga Ummayad iyo Macbudka Hercules. Macbudkan waxaa la dhisay waqtigii Marcus Aurelius wixii ka harayna waxay muujinayaan inay ahayd macbud aad u qurux badan.
Qasrigii Umayyad waa dhisme boqortooyo oo degenaa gurigii gudoomiyaha wuxuuna ku burburay dhulgariirkii AD 749 si waligiis u burburo. Hoolka weyn ee dhagaystayaasha ee qaabka iskutallaabta iyo saqafka cajiibka ah ee ay dib u dhisteen khubarada qadiimiga ah ee Isbaanishka ayaa wali ah The cistern iyada oo sallaankeeda salka hoose iyo tiirka cabbiray heerka biyaha iyo Byzantine basilica laga soo bilaabo qarnigii 15aad oo leh mosaics-keeda. Waxaa jira hagayaal maqal ah oo lagu booqdo Qasriga oo dhan, JD XNUMX saacaddiiba.
El Amphitheater-ka Roman Waa la soo celiyey. Waxay ku taal buurta dhinaceeda waxayna leedahay awood dhan lix kun oo qof. Waxaa la rumeysan yahay in la dhisay qarnigii 50aad wuxuuna leeyahay meel xurmeed oo ay ku taalo taallada Athena oo hadda ku taal Matxafka Qaranka ee Archaeological Museum. Waxaa dib loo soo celiyay dhamaadkii 'XNUMXs laakiin ma jirin qalab asli ah oo la isticmaalay sidaa darteed uma muuqato mid wanaagsan. Iftiinka subaxda ayaa ugu fiican sawir qaadista iyo iftiinka qorrax dhaca, waa wax fiican.
In yar aan ku nasano waan awoodnaa booqo Bath Turkish. Halkaan haweenku waxay ku maydhanayaan dhinac dhinac ragana dhinaca kale. Waxaa jira jacuzzis kulul ama diirran iyo sidoo kale saunas qabow. Khibraddu wey wanaagsan tahay wax badanna waan nasannay. Khibrad kale oo wanaagsan ayaa ah booqo dukaanka dhir udgoon. Udgoonku waa cajiib! Waad urin kartaa, dhadhamin kartaa oo iibsan kartaa uunsi gaar ah oo aad guriga ku qaadato. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa dhadhan fiican Qaxwaha Urdun, kala dooro turki ama sacuudi, dhadhamiya Mezze, Aaladaha cuntada lagu cunto ama tubas (falafel, hummus, tabbouleh, fattoush, saytuun ...).
El Matxafka Royal ee Gaari wuxuu soo bandhigayaa taariikhda Urdun laga soo bilaabo 20-yadii ilaa maanta. Baabuurtu waa kuwii boqorradii ka horreeyay, laga soo bilaabo King Abdullah I, aasaasihii boqortooyada, iyo wixii ka dambeeya. Waxaa jira 1952 Lincoln Capri, 810 Cord 1936 iyo 300 Mercedes Benz 1955SL. Dalxiisayaashu waxay bixiyaan JD 3, matxafkuna wuxuu furan yahay maalin kasta marka laga reebo Talaadada, laga bilaabo 10ka subaxnimo ilaa 7da fiidnimo, inkasta oo xagaaga albaabadu xirmaan 9 pm.
Dhiniciisa waxaa Matxafka Jordan waxay muujineysaa taariikhda dhaqanka ee dalka iyadoo loo marayo hidaha hodanka ah. Waxay ku taal bartamaha, Ras al-Cayn iyo haddii aad xiiseyneyso waagii hore, hadda iyo mustaqbalka Boqortooyadan Bariga Dhexe waa meel xiiso leh. Ka taxaddar inuu xirmo Isniinta. The Matxafka qadiimiga ah Waxay leedahay hoolalka carwooyinka, shaybaar lagu ilaaliyo, qolal badan oo carwooyin ah iyo carwooyin ku meel gaar ah oo waliba wax ka qabta dhaqanka, hidaha iyo taariikhda dalkan.
Labo ama seddex maalmood gudahood waxaad si fudud ugu tamashleyn kartaa Amman oo ku raaxeysanaya aroortii, galabtii iyo habeennadii. Waxaa jira makhaayado iyo naadiyo lagu cayaaro, waxaa ku yaal maqaaxiyo iyo baarar inaad nasato, cabto wax cusub oo aad dareento qayb ka mid ah magaalada Urdun in muddo ah. Dabcan, haddii ay tahay fursaddaada inaad la kulan Petra ma seegi doontid: socdaal qaas ah oo soconaya 10 saacadood oo uu baxayaa hore, 7da aroornimo ee Petra Waxay u jirtaa 225 kilomitir ka yimid Camaan. Xisaabi qiyaastii $ 200.
Haddii aadan dalxiis u soconayn waxaad baska raaci kartaa oo tigidhka ka soo iibso Xarunta Booqashada ee Petra ee Wadi Musa, oo ah magaalada ugu dhow burburka, oo laba kiiloo mitir u jirta. Waxaad ku imaanaysaa burburka adoo lugeynaya ama faras ka gudbaya derbiyada dhagaxa weyn, Siq. Tigidhka maalintii waa 90 JD oo haddii aad sii dheeraato, hal habeen, waa 50 JD. Waxaa jira meelo lagu cuno goobta oo irridda laga helo waxay ku siinayaan khariidad si aad u hesho dhammaan dhismaha. Hubi inaad soo qaadan karto cuntadaada.
Ma rabtaa joog Petra habeenkii oo sii wad booqashada maalinta xigta? Waxaad leedahay xero, Toddobada yaabab ee Bedouin oo leh sariiraha laga bilaabo 22 euro qofkiiba, Rocky Mountain Hotel oo leh qolal ka kooban 19, 44 euro oo quraacda Carabtu ku jirto ama Hotel Al Rashid, oo leh quraac iyo qaboojiye iyo qolal 16 euro, tusaale ahaan.
Sidaad u aragto, wax ka yar hal toddobaad gudaha Amman waxaad haysataa kaar wanaagsan oo ka socda Jordan. Waxaan ku dari lahaa maalmo kooban dalxiis ku yaal xeebta Badda Dhimatay si aan ugu heeso bakhtiyaanasiibka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Maxaa la arkaa » Maxaa lagu arkaa Amman, caasimada Urdun